အမရပူရ - မန္တလေး | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
အမရပူရမြို့လယ်ကနေတချို့ 10km ယခုမန္တလေးတစ်ဦးအပြင်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးဖြစ်ပါသည်. အကြောင်းကိုကနေ 1780 သို့ 1855 ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်. အမရပူရစီရင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း AM ဖြစ်ပါသည် – တစ်ဦးက – RA – PURA.
အမရပူရ၏နောက်ဆုံးရှင်ဘုရင်ကိုဖျက်သိမ်းနန်းတော်နှင့်မြို့တော်အဆောက်အဦအများစုသူမင်းတုန်းမင်းခဲ့သည် 1855 ယခုအခါမန္တလေးမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်အဖြစ်လူသိများသည့်ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့.
မူရင်းအမရပူရတော်ဝင်နန်းတော်မြို့ရိုးအပျက်အယွင်းအကြောင်းကိုတစ်ဘက်နှင့်အတူတစ်စတုရန်းပါပြီဖို့ကပြသ 1.6 အရှည်ကီလိုမီတာ, တစ်ကျုံးကဝိုင်း. လေးခုအတွင်းမှထောင့်တစ်ဦးချင်းစီမှာအကြောင်းစေတီတော်ရပ်တည် 30 မြင့်မားတဲ့မီတာ. မူရင်းနန်းတော်အပျက်အယွင်းအတွင်းပိုင်းကိုသင်ဘိုးတော်ဘုရားဘုရင်ဘကြီးတော်၏သင်္ချိုင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်.
ရာစုနှစ်နှစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့အမရပူရတော်ဝင်နန်းတော်ထဲမှာအများဆုံးထူးခြားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဂုဏျဗိမာနျခဲ့တဲ့, အတူတန်ဆာဆင် 250 gilt သစ်သားမြတ်သောတိုင်, နှင့်ဗုဒ္ဓ၏အဧရာကြေးဝါရုပ်တုများ. ကံမကောင်းစွာအိမ်တော်ပတ်လည်မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော်မှဖျက်သိမ်းနှင့်ဖယ်ရှားခဲ့သည် 1855. ကြှနျုပျတို့သညျဤတစ်ကြိမ်လှပသောအဆောက်အဦမှတ်မိဖို့ယနေ့သမျှအားလုံးသည်တစ်ဦးကိုဗြိတိသျှအရာရှိများကဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည် 1795.
သငျသညျဦး-ပိန်တံတားမှာလှပသောနေထွက်နှင့်နေဝင်ဆည်းဆာကိုကြည့်ရှုနိုင်, Kyauktawgyi စေတီတော် adorning သည့်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများမှာအံ့ဩ, အဆိုပါမဟာ Gandhayon ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသံဃာတော်များသွားရောက်ကြည့်ရှု, နှင့်ဦးသိန်းညိုပိုးယက်လုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကဲ့သို့လက်မှုပညာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးပေးဆောင်.
အပြင်ပါအပေါ်ကလူကြိုက်များသူတွေကိုထံမှနှင့် Nagayon စေတီတော်များကဲ့သို့အများအပြားသည်အခြားအမှတ်ရစရာမြင်ကွင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှု, အဆိုပါ Pahtodawgyi စေတီတော်, အဆိုပါ Bagaya ကျောင်း (Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) ရွှေကြက်-ကြာမှာများနှင့်အမွှာစေတီပုထိုးများ & ရွှေကြက်-သို့သျောလညျး (သင်ပြီးခဲ့သည့်တံတားဖြတ်ကူးမယ့်မရောက်မီ).
အမရပူရမန္တလေးကနေမဆိုတစ်နေ့ခရီးစဉ်အပေါ်ထည့်သွင်းရန်တစ်ဦးလူကြိုက်များဧရိယာဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်အင်းမှလာရောက်လည်ပတ်သူတွေနဲ့ပေါင်းစပ် (အင်း) နှင့် / သို့မဟုတ်စစ်ကိုင်း.